Oromo Protests in Oromia and Diaspora – Adoolessa 23, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOromo Protests in Oromia and Diaspora – Adoolessa 23, 2020
The people of Silte have explained the deep sorrow that is called: He wishes your justice for Hachalu :: He has testified that they are with the Oromo people :: #OromoProtest #Abiy #FreeOromia
Uummanni Oromoo Saboota Oromiyaa keessa jiraniif gaachana malee diina miti.
Uummanni Oromoo uummata ilma namaa mitii bineensa bosonaa fi lubbuqabeeyyii kamiifuu kabajaa guddaa qabuudha. Uummanni Oromoo seeran ala lubbuu kamuu hin balleessu. Ajjeefamuu qaroo artistii Oromoo HaaCaaluu Hundeessaa booda Oromiyaa keessatti qabeenya sabaa fi sablammootaa fi miidhaa saboota biroo irra gahe tahe jedhamee Oromoo ittiin yakkuudhaf qaama qindaa’en gochaa raawwatame jedheen yaada. Sababni isaatis uummanni Oromoo saba kamirraafuu jibba hin qabu. Saba kamirraafuu diinummaa tokkollee hin qabu. Hardhaa mitii gaafa ilmaan Oromoo miliyoonotaan naannoo #Sumaalee irraa buqqifaman, qabeenyi isaanii jimlaan duguugamee saamame, ilmaan Oromoo dhibboota hedduun ajjeefaman Oromoon saba SUMAALEE tokkollee irratti miidhaa hin geessine. Inumaa Sumaalen obbolaa keenya jedhee shira diinaa fashalse. Gaafa ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan Beenishaangul irraa buqqifaman uummanni Oromoo Saba Beenishaangul waliin waldhabdee tokkollee hin godhanne. Oromoon saboota isa keessa jiraataniif gaachana malee diina miti.
Hardhas uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa keessatti akka waan Saba Amaaraa fi saboota biroo irratti miidhaa geessisuuf deemutti hololli oofamu tahe jedhamee Oromoo maqaa ittiin balleessudhaaf shira qindeeffameedha. Uummanni Amaaraa fi saboonni biroo uummata Oromoo wajjiin jiraachuu kan eegale hardhaa miti. Baroota wayyaanee irratti qabsaa’aa tureeyyuu uummanni Oromoo saba Amaaraas ta’ee saba biroo tuqee hin beeku. Saboonni biroo kan Oromiyaa keessa jiraatan obbolaa uummata Oromooti. Hardhas borus waliin jiraata. Qaamonni akka waan Oromoof dhaabbatanii fakkaatanii saba biroo miidhan Oromoo saba baldhaa bakka hin bu’an, akkasumas namoonni uummata Amaara fi saboota biroof quuqamtoota fakkaatanii Oromoo irratti duulan uummata Amaaraas ta’ee saboota biyyattii bakka hin bu’an. Uummanni Oromoo akkuma duudhaa isaatti sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan waliin jaalalaa fi kabajaadhan waliin jiraachuu itti fufa.
Uummanni Oromoo fi Qeerron Oromoo yeroo kamiiyyuu caalaa sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraniif eegumsa cimsuun sabni Oromoo saboota bitootif sodaa osoo hin taane obbolaa tahuu itti agarsiisun barbaachisaadha.
Oromiyaan godinaalee gargaraa keessatti woraani #Ertiraa irraa Oromiyaatti ergamee ummata ajjeesuuf dararuun dhagahame.
Shaashamannee gandaa 03 manaa barumsa #lidstar jedhamuu qubachuun ummata dararaa jirachuun dhagahame akkasuma kantiibaa magaalaa Shaashamannee duraanii hidhatti ergaa darbanii booda amma bulchaa har’a ummata Kibbaa keessa #waltaa irraa fiduun dhagahame.
godinaalee polisoonni #Ertiraa jiran keessa
1ffaa #Shaashamannee_BaaleeRoobee_Finfinnee_HarargeeLixaa_Shawaa Lixaa fi eegdub Abiy Ahmed polisii Ertiraa ta’uun mirkana’e jiraa
dafa wolii dabarsaa gocha abiyoot saxilaa abiy must Go
Oromo Media - August 29, 2020